ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရာထိန်းသိမ်းမှုမူဝါဒ - Huawei
Huawei Technologies Co. Ltd ( အခါအားလျှော်စွာ “Huawei” ၊ “ကျွန်ုပ်တို့” ၊ “ကျွန်ုပ်တို့ကို” နှင့် “ကျွန်ုတို့အား” ဖြင့် နာမ်စားခေါ်ဝေါ်သုံးစွဲမည်) သည် သင့်၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးများကို အလေးထားပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရာ ထိန်းသိမ်းမှုဆိုင်ရာ မူဝါဒများကို ပိုမိုသိရှိစေရန် အောက်ပါတို့ကို ဆက်လက်ဖတ်ရူပေးပါ။ ထိုပုဂ္ဂိုလ်ရေးရာ ထ်ိန်းသိမ်းမှုဆိုင်ရာမူဝါဒကို ညွှန်ပြသော လင့်ခ်ပါရှိသည့် Huawei ၏ ဝက်ဆိုက်များ၊ ပစ္စည်းများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများတွင် အကျုံးဝင်ပါသည်။
Huawei အနေဖြင့် သင့်၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရာ အချက်အလက်များကို မည်သို့ ပြုလုပ်မည်ကို ဤတွင်ဖော်ပြသွားပါမည်။ Huawei သည် ပစ္စည်းနှင့် ဝန်ဆောင်မှုဆိုင်ရာ သီးသန့်အချက်အလက်များကို ကောက်ယူခြင်းမပြုလုပ်မီ မူဝါဒ (သို့)ကြိုတင်အသိပေးခြင်းမှတစ်ဆင့် အကြောင်းကြားပေးပါမည်။
၁. သင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေး အချက်အလက်များကို ကောက်ယူခြင်းနှင့် အသုံးပြုခြင်း
၂. ကွတ်ကီးများနှင့် ပုံစံတူနည်းပညာများ
၃. သင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေး အချက်အလက်များကို ထုတ်ဖော်ခြင်း
၄. သင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေး အချက်အလက်များကို ရရှိ၊ ထ်ိန်ချုပ်ခြင်း
၅. သင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေး အချက်အလက်များကို ကာကွယ်ခြင်း
၆. ကလေးများ၏ လုံခြုံမှုကို ပံ့ပိုးခြင်း
၇. Third party အထောက်အပံ့ပေးသူနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများ
၈. သင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များကို နိုင်ငံတကာသို့လွှဲပြောင်းခြင်း
၉. နောက်ဆုံးရ မူဝါဒ အသစ်များ
၁၀. ကျွန်ုပ်တို့အား ဆက်သွယ်ခြင်း
၁. သင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေး အချက်အလက်များကို ကောက်ယူခြင်း နှင့်အသုံးပြုခြင်း
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်ဆိုသည်မှာ သင့်ကိုယ်ပိုင်အချက်အလက်ဖြစ်စေ၊ အခြားအချက်အလက်များဖြင့်ပေါင်းစည်း၍ ဖြစ်စေ သင့်မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြနိုင်သည့် အချက်အလက်များကို ဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝက်ဆိုက်များ၊ ပစ္စည်းများ၊ ဝန်ဆောင်မှုများကို သင်အသုံးပြုသည့်အခါ (ဥပမာအားဖြင့် Huawei အကောင့်ဖန်တီးခြင်း (သို့) အထောက်အပံ့ပေးရန် ကျွန်ုပ်တို့ကို ဆက်သွယ်စေလိုခြင်း) တွင် သင်ဆီမှတိုက်ရိုက်ရရှိော သတင်းအချက်အလက်များဖြစ်သည်။ သင်မည်သို့ မည်ပုံ ကျွန်ုပ်တို့ ဝက်ဆိုက်များ၊ ပစ္စည်းများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကို အသုံးပြုပုံနှင့် စပ်လျဉ်း၍လည်း သင့်အချက်အလက်များကို ရယူနိုင်ပါသည်။ ဥပမာ- ကွတ်ကီးကဲ့သို့ နည်းပညာကိုအသုံးပြုပြီး သင့် device ပေါ်တွင်ရှိနေသော ဆော့ဖ်ဝဲလ်များမှ အချက်အလက်များကို ရယူနိုင်ပါသည်။ ဥပဒေ၏ ခွင့်ပြုချက်အရ အများပြည်သူ နှင့် စီးပွားဖြစ် third-party များဆီမှလည်း အချက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်တို့ရယူနိုင်ပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှုများကို အထောက်အကူပြုရန် အခြားကုမ္ပဏီများမှ ဝယ်ယူမှုအချက်အလက်များကို ရယူခြင်း။ ကျွန်ုပ်တို့ ကောက်ယူသော ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရာ အချက်အလက်များတွင် အမည်၊ ကျား/မ၊ လုပ်ငန်းနာမည်၊ အလုပ်အကိုင်၊ postal နှင့် အီးမေလ်လိပ်စာ၊ ဖုန်းနံပါတ် နှင့် login အချက်အလက် ( အကောင့်နှင့် လှို့ဝှက်နံပါတ်) ၊ ဓာတ်ပုံများ နှင့် ထောက်ခံချက်အချက်အလက် စသဖြင့် သင့် Huawei နှင့်ဆက်စပ်မှုပေါ်မူတည်၍ ပါဝင်ပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့် သင်ဝင်ရောက်ကြည့်ရူသော ဝက်ဆိုက် (သို့) ပစ္စည်းများ နှင့် ဝန်ဆောင်မှုများ ဖြစ်ပါသည်။ ထိုအပြင် သင့်ထံမှ ကျွန်ုပ်တို့ ရရှိသော သတင်းအချက်အလက်များနှင့် ကျွန်ုပ်တို့ထံပို့သော မက်ဆေ့ခ်ျများကိုလည်း ကောက်ယူပါသည်။ ၎င်းတို့မှာ သင်မေးထားသော မေးခွန်း (သို့) ဝန်ဆောင်မှုအထောက်အပံ့ပေးရန် မေးခွန်းများ (သို့) သတင်းအချက်အလက်များဖြစ်ပါသည်။
Huawei ၏ ပစ္စည်းများ၊ ဝန်ဆောင်မှုများကို အသုံးမပြုမီ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရာ အချက်အလက်များကို သင့်ပေးကောင်း ပေးရန်လိုအပ်ပါလိမ့်မည်။ တချို့သော ကိစ္စရပ်များတွင် သင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရာအချက်အလက်များကို Huawei သို့မပေးရန် ရွေးချယ်ခွင့်ရှိပါသည်။ သို့သော် မှန်ကန်သောအချက်အလက်များကို မပေးခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည်လည်း သေချာသော ပစ္စည်း၊ ဝန်ဆောင်မှုများပေးအပ်ခြင်း (သို့) သင့်လိုအပ်ချက်များကို တုန်ပြန့်ခြင်းငှာ မတတ်စွမ်းနိုင်ပါ။
သင့်၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရာ အချက်အလက်များကို အောက်ပါတို့ကို ပြုလုပ်ရန်အသုံးပြုပါမည်။
မှာယူခြင်း ပို့ဆောင်ခြင်း၊ activate လုပ်ခြင်း (သို့) ပစ္စည်းများ (သို့) ဝန်ဆောင်မှုများကို အတည်ပြုခြင်း၊ လေ့ကျင့်ခြင်းနှင့် အသိပြုမှတ်လက်မှတ်များပေးခြင်း၊ လေ့ကျင်းခြင်းနှင့် အသိပြုလက်မှတ်ပေးရန် စာမေးပွဲများ စီမံခြင်းနှင့် လုပ်ဆောင်ခြင်း၊ onsite (သို့) virtual လှုပ်ရှားမှုများတွင် ပါဝင်လုပ်ဆောင်ခြင်း၊ ပြောင်းလဲခြင်းအတွက် သင့်တောင်းဆိုချက်များ (သို့) သင့်တောင်းဆိုထားသော သတင်းအချက်အလက်များအတွက် ဖြည့်ဆည်းပေးခြင်း (ဥပမာ- ပစ္စည်းများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများအတွက် marketing material များ နှင့် white paper များရယူရန်တောင်းဆိုခြင်း) နှင့် နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ အထောက်အပံ့ခြင်း များတွင် သင့်၏ လုပ်ငန်းကိစ္စ (သို့) ဝန်ဆောင်မှု တောင်ဆိုချက်များအားဖြည့်ဆည်းပေးရန် အသုံးပြုပါသည်။
သင့်၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့် သင့်ထံသို့ ဆက်သွယ်ခြင်းများတွင် သင်စိတ်ဝင်စားနိုင်သော ပစ္စည်းများ နှင့် ဝန်ဆောင်မှုအကြောင်းအရာများကို ပို့ပေးခြင်း၊ Huawei ၏ လှုပ်ရှားမှုလုပ်ငန်းများ ပါဝင်ရန် ဖိတ်ခေါ်ခြင်း ( ပရိုမိုးရှင်းနဲ့ သက်ဆိုင်သော လှုပ်ရှားမှုများအပါအဝင်)၊ ဈေးကွက် ဆန်းစစ်ခြင်း (market surveys) (သို့) စိတ်ကျေနပ်မှု ဆန်းစစ်ခြင်း (satisfaction surveys) (သို့) မာကတ်တင်းနှင့် သက်ဆိုင်သော သတင်းအချက်အလက်များ ပေးပို့ခြင်းတို့ ပါဝင်နိုင်ပါသည်။ အကယ်၍ အဆိုပါ အချက်အလက်များကို ရယူလိုခြင်းမရှိပါက အချိန်မရွေး ရပ်နားနိုင်ပါသည်။
လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှု စနစ် (သို့) အပလီကေးရှင်း တိုးမြှင့်ခြင်းနှင့် တပ်ဆင်ခြင်းကဲ့သို့သော အရေးကြီးသော ကြိုတင်သတိပေးမှုများပေးပို့ခြင်း အတွက် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
သင့်အတွက် သီးသန့် သုံးစွဲမှုအတွေ့အကြုံ နှင့် content များကိုပေးအပ်ခြင်းအတွက် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
Supplier များနှင့် စီးပွားရေးမိတ်ဖက်များကို စီမံခြင်း၊ ဆက်သွယ်ခြင်းနှင့် အလုပ်အတူတကွလုပ်ဆောင်ခြင်းအတွက် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
အတွင်းပိုင်း ဘဏ္ဍာရေးစီစစ်သူများ၊ ဒေတာစီစစ်သူများနှင့် သုသေသန များမှတစ်ဆင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ပစ္စည်းနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကို တိုးတက်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်ရန် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုများ၏ အကျိုးသက်ရောက်မှုကို စီစစ်လေ့လာခြင်း နှင့် ဈေးကွက်ရှယ်ယာများကို စီစစ်ရန်အတွက် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
သင့်ဆီမှ လိုအပ်ချက် အစီရင်ခံစာများရရှိပါက ပြစ်ချက်ရှာဖွေဖြေရှင်းပေးနိုင်အတွက် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
သင့် upload (သို့) ဒေါင်းလုတ်ပြုလုပ်သော အချက်အလက်များနှင့် upload (သို့) ဒေါင်းလုတ်ပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သော အချက်အလက်များကို မျှဝေခြင်း၊ သိမ်းဆည်းထားခြင်းများအတွက် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့ ပစ္စည်းများ၊ ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် သုံးစွဲသူများ၏ လုံခြုံရေးကို သေချာစေပြီး ကာကွယ်ရေးကို တိုးမြှင့်ကာ anti-fraud program များပြုလုပ်ရန်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
ဥပဒေဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များ၊ လုပ်ငန်းစံနှုန်းများနှင့် မူဝါဒများကို အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိစေရန်နှင့် လိုက်နာစေရန်အတွက်အသုံးပြုပါသည်။
Huawei သည် မည်သည်မည်ဝါဟူ၍ ခွဲခြားမသိနိုင်သော အချက်အလက် (Non-PII) များကိုလည်း ကောက်ယူအသုံးပြုနိုင်သည်။ Non-PII ဆိုသည်မှာ သီးသန့်တစ်ဦးချင်းဆီကို ခွဲခြားနိုင်ရန် အသုံးမပြုနိုင်ပါသည်။ ဥပမာ ဝက်ဆိုက်သို့ ဝင်ရောက်ကြည့်ရူသောလူဦးရေကို ကောက်ယူခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဤသို့ကောက်ယူခြင်းမှာ အသုံးပြုသူများအနေနှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝက်ဆိုက်၊ ပစ္စည်းများ၊ ဝန်ဆောင်မှုများအား အသုံးပြုပုံကိုနားလည်စေရန်သာ ဖြစ်ပါသည်။ ထိုသို့အားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှုများကို တိုးတက်အောင် လုပ်ဆောင်နိုင်မှာဖြစ်ပြီး သုံးစွဲသူ၏ စိတ်ကျေနပ်မှုကို ပိုမိုရရှိစေမည်ဖြစ်ပါသည်။ Huawei သည် non-PII များကို အခြားသောရည်ရွယ်ချက်များဖြင့် ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ခွင့်ရှိစွာ ကောက်ယူခြင်း၊ အသုံးပြုခြင်း၊ လုပ်ဆောင်ခြင်း ၊ လွှဲပြောင်းခြင်း (သို့) ထုတ်ဖြော်ခင်းများ ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
သင့်၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရာ အချက်အလက်များနှင့် nono-PII များကိုသီးသန့်ခွဲခြားပြီး အသုံးပြုနိုင်အောင် ကျွန်ုပ်တို့ ကြိုးစားပါမည်။ အကယ်၍ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရာ အချက်အလက်များနှင့် non-PII များ ရောယှက်နေပါက ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရာအချက်အလက်ဟုသာ ယူဆ၍ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
Huawei သည် သင်၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရာအချက်အလက်များကိုအသုံးပြုရာတွင် သင့်လျှော်သော အခြေခံဥပဒေပိုင်းဆိုင်ရာ ပြဌာန်းထားသော ဥပဒေများ၏လိုအပ်ချက်များအတိုင်း လိုက်နာလုပ်ဆောင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
အရောင်းအဝယ်ကိစ္စ (သို့) ဝန်ဆောင်မှုအတွက်တောင်းဆိုမှုများကို ပြန်လည်တုန့်ပြန်သည့်အခါ စာချုပ်ချုပ်ဆိုရန်အတွက် သင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရာ အချက်အလက်များကို အသုံးပြုခြင်း
သင့်၏ခွင်ပြုချက်ဖြင့် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရာအချက်အလက်များကို ဆက်လက်အသုံးပြုခြင်း
သင်၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရာအချက်အလက်များကို အသုံးပြု၍ သင့်အား ဆက်သွယ်ခြင်း၊ မာကတ်ခြင်းပြုလုပ်ခြင်း (သို့) ဈေးကွက်လေ့လာခြင်း ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ ပစ္စည်းနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများအား တိုးတက်အောင်ပြုလုပ်ခြင်း၊ ကာကွယ်ရေးကို တိုးမြှင့်ကာ anti-fraud program များပြုလုပ်ခြင်း နှင့် တခြားသောရည်ရွယ်ချက်များကို Huawei (သို့) third party များ၏ တရားဝင် လုပ်ပိုင်ခွင့်ပေါ်မူတည်၍ လုပ်ဆောင်ပါသည်။ တရားဝင်လုပ်ပိုင်ခွင့်များတွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို ပိုမိုကောင်းမွန်စွာ စီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့် လည်ပတ်စေခြင်း နှင့် ပစ္စည်း၊ ဝန်ဆောင်မှုအထောက်အပံ့ပေးခြင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ စီးပွားရေး၊ စနစ်၊ ပစ္စည်းများ၊ ဝန်ဆောင်မှုများ နှင့် သုံးစွဲသူများ၏ လုံခြုံရေးကို ကာကွယ်ခြင်း၊ အတွင်းပိုင်းအုပ်ချုပ်စီမံခြင်း၊ အတွင်းပိုင်းမူဝါဒနှင့် လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်လိုက်နာခြင်းနှင့် ဤမူဝါဒတွင်ဖော်ပြထားသည့် အခြားသော တရားဝင်လုပ်ပိုင်ခွင့်များပါဝင်ပါသည်။
ဥပဒေရေးရာ တာဝန်ဝတ္တရားကို လိုက်နာရန် သင်၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရာအချက်အလက်များကို လိုအပ်သလို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
၂. Cookies နှင့် အခြားအလားတူနည်းပညာများ
ဝက်ဆိုက်အလုပ်လုပ်ပုံ မှန်ကန်ကြောင်းသေချာစေရန် သင်၏ ကွန်ပြုတာ (သို့) မိုဘိုင်းများတွင် အချက်အလက်အနည်းငယ်ကိုမှတ်သားနိုင်သည့် cookie ကိုကျွန်ုပ်တို့ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ cookie သည် ကွန်ပျူတာ (သို့) မိုဘိုင်းပေါ်ရှိ web ဆာဗာမှ သိမ်းဆည်းထားသည့် စာဖိုင်တစ်ခုဖြစ်သည်။ cookie အတွင်းရှိ အကြောင်းအရာများကို ထို cookie ကိုဖန်တီးထားသည့် ဆာဗာတစ်ခုတည်းမှသာလျှင် ပြန်လည်ထုတ်ယူခြင်း (သို့) ဖတ်ရူခြင်းလုပ်နိုင်ပါသည်။ cookie အတွင်းရှိအကြောင်းအရာများတွင် မည်သူမည်ဝါ ဖြစ်ကြောင်းဖော်ထုတ်ချက်များ၊ ဆိုက်အမည်နှင့် အချို့သော ကဏန်းများ၊ ဝိသေသလက္ခဏများ ပါဝင်ပါသည်။ cookie များသည် သင့်အသုံပြုသော browser များ (သို့) မိုဘိုင်းအပလီကေးရှင်းများအတွက် ထူးခြားပြီး သင့်ကြိုက်နှစ်သက်မှုများ (သို့) သင့်ဝယ်ယူလိုက်သော ပစ္စည်းများ ကဲ့သို့သော အကြောင်းအရာများကို ဝက်ဆိုက်မှ သိမ်းဆည်းနိုင်အောင် လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်ပါသည်။
အခြားများစွာသော ဝက်ဆိုက်များ၊ အင်တာနက် ဝန်ဆောင်မှုအထောက်အပံ့ပေးသူများကဲ့သို့ Huawei သည်လည်း သုံးစွဲသူအတွေ့အကြုံကို တိုးတက်စေရန် ရည်ရွယ်ဖြင့် cookie များကိုအသုံးပြုပါသည်။ session cookies များကို ဝက်ဆိုက်သို့ တစ်ခါလည်ပတ်ပြီတိုင်း ပယ်ဖျက်ပြီး persistent cookies များသည် အကြိမ်များစွာလည်ပတ်မှုများအထိ ကျန်ရှိနေမည်ဖြစ်သည်။
Cookies များသည် သင့်ကွန်ပျူတာ (သို့) မိုဘိုင်း (သို့) အခြား browser များတွင်အသုံးပြုသော ဘာသာစကား၊ စာလုံးအရွယ်အစားကဲ့သို့သော setting များကို ဝက်ဆိုက်အားမှတ်သားရန်ခွင့်ပြုပါသည်။ ထိုကြောင့် အသုံးပြုသူများသည် ဝက်ဆိုက်သို့ လာရောက်လည်ပတ်သည့် အကြိမ်တိုင်းအတွက် မိမိကြိုက်နှစ်သက်သောအကြောင်းအရာများကို ပြန်လည် လုပ်ဆောင်ရန်မလိုတော့ပါ။ ဆိုလိုသည်မှာ အကယ်၍ cookie များကိုသာအသုံးမပြုဘူးဆိုလျှင် ဝက်ဆိုက်ပေ့ခ်ျတစ်ခုကိုသင်ဝင်ရောက်သည့် အကြိမ်တိုင်း လည်ပတ်သူအသစ်အဖြင့်သာ ဝက်ဆိုက်မှပြုမူလုပ်ဆောင်မည်ဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့် သင် Log in ပြုလုပ်ပြီသား ဝက်ဆိုက်တစ်ခုအတွင်းရှိ ဝက်ဆိုက်ပေ့ခ်ျတစ်ခုမှ အခြားဝက်ဆိုက် ပေ့ခ်ျတစ်ခုကိုကူးပြောင်းမိပြီး မူရင်းဝက်ဆိုက်သို့ ပြန်လည်သွားလိုပါက အလိုအလျှောက်မှတ်သားထားခြင်းမရှိသည့်အတွက် တစ်ဖန်ပြန်၍ Log in ဝင်ရမည်ဖြစ်သည်။
ဒီမူဝါဒအတွင်းတွင် မပါရှိသော မည်သည့်ရည်ရွယ်အတွက်မျှ Huawei သည် cookie များကိုအသုံးမပြုပါ။ သင့်စိတ်သဘောအတိုင်း cookie များကို စီမံခြင်း၊ ပယ်ဖျက်ခြင်းများပြုလုပ်နိုင်သည်။ အသေးစိတ်သိရှိရန် AboutCookies.org တွင်ဝင်ရောက်လေ့လာနိုင်ပါသည်။ သင့်ကွန်ပျူတာတွင် သိမ်းဆည်ထားသော cookie များအားလုံးကို ပယ်ဖျက်နိုင်ပြီး browser အများစုသည် cookies များကို ဟန့်တားနိုင်သော ရွေးချယ်ခွင့်ပေးထားပါသည်။ သို့သော် ထိုသို့ ပြုလုပ်လိုပါက ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝက်ဆိုက်သို့ ဝင်ရောက်သည့်အကြိမ်တိုင်း အသုံးပြုသူ setting များကို ပြောင်းလဲရန်လိုအပ်ပါသည်။ သင့် browser အတွက် cookie setting များကို စီမံရန်အောက်တွင်လေ့လာပါ။
၂.၂ Web Beacon များနှင့် Pixel Tag များ
Cookie များအပြင် အခြားအလားတူ နည်းပညာများဖြစ်သော web beacon များနှင့် pixel tag များကိုလည်း ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝက်ဆိုက်များတွင်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ဥပမာ- အကယ်၍ Huawei ထံမှ သင် email လက်ခံရရှိပါက Huawei web ပေ့ခ်ျနှင့် ချိတ်ဆက်ထားသည့် click-through URL ပါဝင်ကောင်း ပါဝင်ပါလိမ့်မည်။ အကယ်၍ ထိုလင့်ခ်ကိုသင်နှိပ်ပါက Huawei မှ သင်၏ ဝက်ဆိုက်ဝင်ရောက်လည်ပတ်မှုကို ခြေရာခံကာ သင်၏ ကြိုက်နှစ်သက်ရာ ဦးစားပေး ပစ္စည်းများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများအကြောင်းကို လေ့လာပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှုကို တိုးတက်အောင်လုပ်ဆောင်မည်ဖြစ်သည်။ web beacon သည် ဝက်ဆိုက် (သို့) အီးမေးလ်တွင် ထည့်သွင်းထားသည့် ရှင်းလင်းသော graphic ပုံရိပ်ဖြစ်သည်။ အီမေးလ်အား ဖွင့်ဖတ်ခြင်းရှိ၊ မရှိကို ခြေရာခံရန် ကျွန်ုပ်တို့သည် pixel tag များကိုအသုံးပြုပါသည်။ ဤသို့ ခြေရာခံခြင်းကို မနှစ်သက်ပါက Huawei မှ အီးမေးလ်ပို့ခြင်းကို အချိန်မရွေး ရပ်နားနိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝက်ဆိုက်ကိုအသုံးပြုခြင်းသည် အထက်ပါဖော်ပြထားသော cookie များ၊ web beacon များနှင့် pixel tag များအသုံးပြုခြင်းကို သင်သဘောတူသည်ဟု ယူဆပါသည်။
Huawei ၏ တရာဝင် မိတ်ဖက်မှုအထောက်အပံ့ပေးသော ဝန်ဆောင်မှုဖြစ်ပါက သင့်၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရာ အချက်အလက်များကို ဤမူဝါဒတွင် ဖော်ပြထားသော မိတ်ဖက်များကို မျှဝေပါသည်။ ဥပမာ- အကယ်၍ သင်သည် အွန်လိုင်းမှတစ်ဆင့် Huawei ထံမှ ဝယ်ယူခြင်းပြုလုပ်ပါက သင့်ထံသိုိ့ပို့ဆောင်ခြင်းပြုလုပ်ရန် ကျွန်ုပ်တို့အနေနှင့် သင့်အချက်အလက်များကို ပို့ဆောင်ရေး အထောက်အပံပေးသူ (သို့) ဝန်ဆောင်မှုပေးသော မိတ်ဆက်များကို မျှဝေပေးရပါမည်။ ထိုအပြင် Huawei သည် နိုင်ငံတကာ ကုမ္ပဏီဖြစ်သည့်အလျှောက် သင့်အချက်များကို Huawei အဖွဲဝင်များ၊ ကုမ္ပဏီခွဲများထံသို့ မျှဝေနိုင်ပါသည်။
သက်ဆိုင်ရာ ဥပဒေများကို လိုက်နာရန် (သို့) ဥပဒေဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ပြန်လည်တုန့်ပြန်ရန် Huawei အနေနှင့် သင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရာအချက်အလက်များကို ဥပဒေအရ တာဝန်ရှိသူများ (သို့) အစိုးရ အင်ဂျင်စီများထံသို့ ထုတ်ဖော်ပြောကြားနိုင်ပါသည်။ အကယ်၍ ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ပေါင်စည်းခြင်း နှင့် သိုးမှီးခြင်း (သို့) ဒေဝါလီခံခြင်း (သို့) စာရင်းရှင်း ဖျက်သိမ်းခြင်း အခြေအနေများတွင် ပါဝင်ခဲ့ပါက အရောင်းအဝယ်ကိစ္စနှင့်ပတ်သတ်သော သင့်၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရာ အချက်အလက်များကို ထုတ်ဖော်နိုင်ပါသည်။ သင့်လျှော်သောအချိန်တွင်လည်း သင်၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရာ အချက်အလက်များကို ထုတ်ဖော်နိုင်ပါသည်။ ဥပမာ စည်းကမ်းနှင့်သတ်မှတ်ချက်များ စီမံဆောက်ရွက်ခြင်း၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထိခိုက်ခြင်း (သို့) ဘဏ္ဍာရေးဆုံးရှူံမှုကို ကာကွယ်ရန်လိုအပ်သည် (သို့) သင့်လျှော်သည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ ယုံကြည်ခြင်း၊ (သို့) တရားမဝင် လှုပ်ရှားမှုများနှင့် ပတ်သတ်ပြီး သံသရာရှိရန် စစ်ဆေးခြင်းများအတွက်ဖြစ်သည်။
၄. သင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေး အချက်အလက်များကို ရရှိ၊ထိန်းချုပ်ခြင်း
Huawei သို့တင်သွင်းထားသော ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရာ အချက်အလက်များမှန်ကန်ရန်မှာ သင့်တာဝန်သာဖြစ်ပါသည်။ Huawei သည် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရာ အချက်အလက်များ၏ မှန်ကန်မှုနှင့် ပြည့်စုံမှုကို ထိန်းသိမ်းပံ့ပိုးထားပြီး အချက်အလက်များကို အမြဲ up-to-date ဖြစ်နေရန် လုပ်ဆောင်ပါသည်။
သက်ဆိုင်ရာ ဥပဒေ၏ လိုအပ်ချက်အရ သင့်အနေနှင့် (i) ကျွန်ုတို့ သိမ်းဆည်းထားသော ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရာ အချက်အလက်များကို ရရှိနိုင်ပါသည် (ii) အချက်အလက်များအား အမှားပြင်ဆင်ပေးရန်၊ update ပြုလုပ်ပေးရန် ကျွန်ုပ်တို့အားတောင်းဆိုနိုင်ပါသည်။ (iii) သင့်၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရာအချက်အလက်များကို အသုံးမပြုရန်တားမြစ်နိုင်ပါသည်။ (iv) ကျွန်ုပ်တို့၏ database ထဲမှ သင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရာအချက်အလက်များကို ပယ်ဖျက်ပစ်ရန် တောင်းဆိုနိုင်ပါသည်။ ကျေးဇူးပြု၍ ဆက်သွယ်ပေးပါ။ လုံခြုံရေးအတွက် သင့်၏ ရေးသားတောင်းဆိုမှုလိုအပ်ပါသည်။ အကယ်၍ တောင်းဆိုချက်သည် မမှန်မကန်၊ ဖြစ်နိုင်ချေမရှိခြင်း (သို့) အခြားသူများ၏ လုံခြုံရေးကို ထိခိုက်စေသည့်ဟု ကျွန်ုပ်တို့တွင် အကျိုးသင့်တင့်သော အကြောင်းပြချက်များရှိပါက တောင်းဆိုချက်ကို ကျွန်ုပ်တို့ ငြင်းပယ်နိုင်ပါသည်။
သင့် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရာအချက်အလက်များ လုံခြုံရေးသည် ကျွန်ုပ်တို့အတွက် အရေးကြီးပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်လျှော်သော ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ စီမံခန့်ခွဲမှု နှင့် နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ တိုင်းတာမှုများကိုအသုံးပြုကာ သင်၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရာ အချက်အလက်များကို ကာကွယ်ပေးပါသည်။ ဥပမာ- အတွင်းရေး အချက်အလက်များကိုကာကွယ်ရန်အတွက် crypotographic နည်းပညာများ၊၊ တိုက်ခိုက်မှုများကိုကာကွယ်ခြင်းစနစ် နှင့် သင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရာအချက်အလက်များကို ကြည်ရူခွင့်ရှိသူကိုသာလျှင် ခွင့်ပြုသည့် ထိန်းချုပ်ခြင်းစနစ် များကို ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုပါသည်။ ထိုအပြင် ဝန်ထမ်းများအား ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရာအချက်အလက်များကာကွယ်ခြင်းနှင့်ပတ်သတ်ပြီး ပိုမိုသတိထားမိစေရန် လုံခြုံရေး ကာကွယ်ခြင်းနှင့်ပတ်သတ်သည့် လေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းများကိုလည်းပို့ချပေးပါသည်။ ဆက်လက်ထားရှိရန် အချိန်ကာလ လိုအပ်ခြင်း (သို့) ဥပဒေမှခွင့်ပြုခြင်းမရှိပါဘဲ ဤမူဝါဒတွင်ဖော်ပြထားသည့် ရည်ရွယ်ချက်များအတွက် သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရာ အချက်အလက်များကို လိုအပ်သည်ထက်ကြာရှည်စွာ ကျွန်ုပ်တို့ထိန်းသိမ်းမထားပါ။ Huawei သည် သင်၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရာ အချက်အလက်များကို ကာကွယ်ပေးရန် ဆုံးဖြတ်ထားပြီးဖြစ်ပါသည်။ သို့သော်လည်း မည်သည့် လုံခြုံရေးတိုင်းတာမှုမှ ပြည့်စုံခြင်းမရှိသည်ကို သတိပြုပေးပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝက်ဆိုက်များ၊ ပစ္စည်းများ၊ ဝန်ဆောင်မှုများသည် လူကြီးများအတွက်အဓိကထားထား ရည်ရွယ်ပါသည်။ ကလေးများအနေနှင့် မိဘ(သို့) အုပ်ထိန်းသူ၏ ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ Huawei အကောင့်ဖန်တီးခြင်းမပြုလုပ်ရပါ။ အကယ်၍ မိဘများ၏ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ကလေးများ၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရာအချက်အလက်များကို ကောက်ယူရရှိပါက မိဘ(သို့) အုပ်ထိန်းသူ၏ ရှင်းလင်းသောခွင့်ပြုချက် (သို့) ကလေးအားကာကွယ်ရန် လိုအပ်ချိန်တွင် ဥပဒေ၏ ခွင့်ပြုချက်အတိုင်းသာ အသုံးပြုခြင်း (သို့) ထုတ်ဖော်ခြင်းပြုလုပ်ပါမည်။ အကယ်၍ ကလေး၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရာ အချက်အလက်များကို ၎င်းမိဘ၏ ခွင့်ပြုချက်မရဘဲ မတော်တဆ ကောက်ယူမိပါက အချက်အလက်များကို အမြန်ဆုံးပယ်ဖျက်ပါမည်။
ပိုမိုကောင်းမွန်သော သုံးစွဲသူအတွေ့အကြုံရရှိစေရန် Huawei နှင့် ၎င်းမိတ်ဖက်များဆီမှသာမက third party များဆီမှ အကြောင်းအရာများ၊ ဝက်ဆိုက် လင့်ခ်များကိုလည်း သင်ရရှိနိုင်ပါသည်။ Huawei တွင် third party များကို ထိန်းချုပ်ခွင့်မရှိသော်လည့်းthird party များမှ ပေးပို့သော လင့်ခ်များကို အသုံးပြုခြင်း၊ အကြောင်းအရာ နှင့် ပစ္စည်းများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကို ကြည့်ရူခြင်ရှိမရှိကို သင်အနေဖြင့်ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။
Third party များ၏ လုံခြုံရေးအလေ့အကျင့်များနှင့် အချက်အလက် ကာကွယ်ခြင်းမူဝါဒများကို Huawei အနေဖြင့် ထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်မရှိသလို ဤမူဝါဒတွင်လည်း ပါဝင်ခြင်းမရှိပါ။ အကယ်၍ သင်၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရာအချက်အလက်များကို third party သို့တင်သွင်းခြင်းပြုလုပ်ခဲ့ပါက third party ၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရာထိန်းသိမ်းရေးမူဝါဒကို ဖတ်ရူပါ။
နိုင်ငံတကာကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည့်အလျှောက် Huawei မှကောက်ယူထားသော သင်၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရာ အချက်အလက်များအား ကျွန်ုပ်တို့၏ ပစ္စည်းများနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများအား သင့်အသုံးပြုသော နိုင်ငံအတွင်းတွင်သာ အသုံးပြုခြင်း (သို့) Huawei (သို့) ၎င်း၏ အဖွဲဝင်များ၊ ကုမ္ပဏီခွဲများ၊ ဝန်ဆောင်မှုအထောက်အပံပေးသူများ (သို့) စီးပွားရေးမိတ်ဖက်များရှိသော နိုင်ငံ၊ ဒေသများတွင်အသုံးပြုခြင်းများကို လုပ်ဆောင်နိုင်ပါသည်။ ဤတွင်များစွာသော သတင်းအချက်အလက် ကာကွယ်ခြင်း ဥပဒေများရှိနိုင်ပါသည်။ ထိုအခြေအနေများတွင် ယခုမူဝါဒနှင့် သက်ဆိုင်သောဥပဒေများ၏လိုအပ်ချက်အတိုင်း သတင်းအချက်အလက်များကို အသုံးပြုရန်သေချာစေမှုဖြင့် တိုင်းတာပါမည်။ ဥပမာအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ စာချုပ် ချုပ်ဆိုခြင်းဆိုင်ရာ စံကဏ္ဍ၊ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရာအချက်အလက်အား တစ်နိုင်ငံမှတစ်နိုင်ငံ ကူးပြောင်းသုံးစွဲခြင်းအတွက် ခွင့်ပြုရယူခြင်း (သို့) တစ်နေရာမှတစ်နေရသို့ ကူးပြောင်းခြင်းမပြုမီ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရာအချက်အလက်များကို မဖော်ထုတ်ခြင်းကဲ့သို့သော များစွာသော ဥပဒေရေးရာ နည်းလမ်းများကို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
Huawei သည်မူဝါဒပြောင်းလဲခြင်း၊ ပြင်ဆင်ပြောင်းလဲခြင်းများကို အချိန်မရွေးပြုလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ အကယ်၍ ပြောင်းလဲမှုများရှိပါက နောက်ဆုံးပြုပြင်ပြောင်းလဲထားသော မူဝါဒများကို ယခုစာမျက်နှာတွင် ထုတ်ပြန်မည်ဖြစ်ပါသည်။ အကယ်၍ မူဝါဒနဲ့ပတ်သတ်ပြီး ကြီးမားသော ပြောင်းလဲမှုများပြုလုပ်မည်ဆိုပါက သင့်အား channel မျိုးစုံမှတစ်ဆင့် ကြိုတင်အကြောင်းကြားမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝက်ဆိုဒ်ပေါ်တွင်သတိပေးခြင်း (သို့) သင့်အားတိုက်ရိုက်အကြောင်းကြားစာပေးပို့ခြင်းများပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။
၁၀. ကျွန်ုပ်တို့ကို ဆက်သွယ်ခြင်း
အကယ်၍ မေးခွန်း (သို့) အကြံပြုချက်တစ်စုံတစ်ရာရှိပါက ကျေးဇူးပြု၍ website@huawei.com သို့ဆက်သွယ်အကြောင်းကြားနိုင်ပါသည်။
နောက်ဆုံးပြောင်းလဲသည့်နေ့ - မေလ ၂၀၁၈